सातामा दुई दिन बिदा : बिरामीलाई थप मर्का- समाचार - कान्तिपुर समाचार
सातामा दुई दिन बिदा : बिरामीलाई थप मर्का
वीर अस्पतालमा अप्रेसन गराउन पालो कुरिरहेका बिरामी मात्रै २ हजार हाराहारी
वैशाख २५, २०७९ प्रशान्त माली
काठमाडौँ — आगामी जेठ १ देखि लागू हुने गरी सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारी निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित हुने भएको छ । बिदाको दिन हाडजोर्नी, नसा, डेन्टल, सुत्केरी–गर्भवतीको जाँच, छाला, न्युरो, साइक्याट्रिक, नाक, कान, घाँटीलगायतको ओपीडी सेवा मात्र नभई अप्रेसनमा समेत सोझो असर पर्छ ।
सरकारी ठूला अस्पतालमा चापका कारण पत्थरी, एपेन्डिसाइड, हाडजोर्नी, नसा च्यापिएको, ट्युमरजस्ता नियमित हुने अप्रेसनका लागि बिरामी वर्षौंसम्म कुर्न बाध्य छन् । सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय लागू भएको खण्डमा बिरामीले थप सास्ती खेप्नुपर्नेछ ।
भोजपुरका ६५ वर्षीय तेरुबहादुर तामाङ दाहिने हातमा स्टिलको पाता राखेर हिँडेको डेढ वर्ष बित्यो । अप्रेसन गरेको नौ महिनापछि निकाल्नुपर्ने पाता राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा बिरामीको चापका कारण अहिले पनि त्यस्तै छ । ओपीडीमा जचाउन शुक्रबार राजधानी आइपुगेका उनले दुखेसो पोखे, ‘महँगोका कारण निजी अस्पतालमा उपचार गराउन सकिन्न । सरकारीमा अझै तीन सातापछि समय दिएको छ ।’
दैलेखका ५४ वर्षीय धर्मराज कोइरालाले ट्युमरको अप्रेसन गराउन राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कुरेको तीन महिना बित्यो । ढाडका पनि बिरामी उनी ओपीडीमा नियमित जाँच गराउँदै आएका छन् । भन्छन्, ‘ट्युमरको डल्लोमा क्यान्सर भएकाले जति चाँडो अप्रेसन गर्न सक्यो त्यति फैलिनबाट बचिन्छ तर अस्पतालमा पालो पाउनै गाह्रो छ ।’ सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयले बिरामी थप मर्कामा पर्ने उनी बताउँछन् । ‘समयमा उपचार नपाउँदा बिरामीको अवस्था खस्कन सक्छ, स्वास्थ्य संस्थामा ड्युटी मिलाएर शनिबारसमेत सेवा दिने वातावरण बनाउनुको सट्टा दुई दिन बिदा दिएर सर्वसाधारणलाई मारमा पार्ने काम भएको छ,’ उनले भने ।
सर्लाहीकी ७५ वर्षीया तिलमाया गौतमको ट्रमा सेन्टरमा १४ दिनअघि खुट्टाको अप्रेसन गरिएको थियो । अचानक दुख्न थालेपछि सोमबार उनी ओपीडीमा जचाउन आइन् । खुट्टामा स्टिलको पाता राखेकाले ह्वीलचियरमा बस्न नसक्ने भएपछि ट्रलीमा ल्याइएको थियो । सातामा दुई दिन बिदा हुँदा बिरामीले आवश्यक परेका बेला विशेषज्ञ सेवा नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको उनकी छोरी राधाले बताइन् । अहिले नै सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरूले अप्रेसनका लागि पालो पाउन महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कान्ति बाल अस्पतालका चिकित्सकका अनुसार मलद्वार खुलाउन गरिने अप्रेसन ३ देखि ६ महिनाभित्र गर्न मिल्छ तर दुई वर्षसम्म पनि पालो नपाउने समस्या छ । अस्पतालको रेकर्डअनुसार गत आइतबार सर्जिकल ओपीडीमा जाँच गराउन ९० जना पुगेकामा ४० जनाको अप्रेसन गर्नुपर्ने देखिएको कान्तिका बालरोग विशेषज्ञ डा. अजित रायमाझीले बताए । सर्जरी ओपीडीमा दिनहुँ ५० देखि १ सयको हाराहारी बिरामी जचाउन पुग्छन् । यो संख्या बढ्दो छ । अस्पतालका अनुसार करिब तीन सय बिरामी हर्निया, क्यान्सरलगायत रोगको अप्रेसनका लागि पालो पर्खेर बसेका छन् । अस्पतालमा औसतमा दैनिक ओपीडीमा ४ देखि ६ सय हाराहारी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको डा. रायमाझी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो निर्णय कार्यान्वयन भएमा गरिबीको रेखामुनि रहेका बिरामीलाई मर्का पर्नेछ ।’
वीरमा अहिले अप्रेसन गराउन पालो कुरिरहेका बिरामी २ हजार हाराहारी छन् । ओपीडीमा दैनिक २ हजारभन्दा बढी बिरामी आउँछन् । प्रसूतिमा पनि दैनिक आउने ३ सयभन्दा बढी गर्भवती र सुत्केरीको जाँच प्रभावित हुने देखिएको छ । सरकारी निर्णय लागू भएमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा दैनिक ५० जना बिरामीको अप्रेसन प्रभावित हुने अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा नराखी गरिएको निर्णयले सरकारी अस्पताल लथालिंग हुने र निजीलाई पोस्ने काम हुनेछ,’ उनले भने, ‘निर्णयमा सरकारले पुनर्विचार गरोस् ।’
उपत्यकाबाहिरका जिल्लाबाट राजधानीमा उपचारका लागि आउने सर्वसाधारण मात्र नभई सम्बन्धित जिल्ला, क्षेत्रीय अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा समेत उपचार प्रभावित हुने देखिएको छ । तैपनि तालुकदार निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही निर्णय गरेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरोकारवालासहित बसेको बिहीबारको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. संगीता मिश्रले भनिन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक, शारीरिक तथा पारिवारिक हिसाबले दुई दिन बिदा दिने निर्णय स्वागतयोग्य छ, सरकारको निर्णय पालना पनि गर्नुपर्छ तर स्वास्थ्य संवेदनशील क्षेत्र भएकाले बिनातयारी निर्णय गरेको देखिन्छ ।’ उनले छलफलकै क्रममा रहेकाले धेरै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताइन् ।
सरकारले दुई दिन बिदा दिने निर्णयसँगै दैनिक काम गर्ने समय साढे ९ देखि साढे ५ सम्म ८ घण्टा तोकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मान्यताअनुसार सातामा ४० घण्टा पुग्छ तर कडाइका साथ नियम लागू गर्न नसकिने अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले बताए । उनले भने, ‘यो सरासर निजी अस्पताल मोटाउने काम भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन हुनुअगावै सरोकारवालासँग छलफल गरेर विकल्प खोज्नुपर्छ ।’ उनले निर्णयले सबैभन्दा बढी गरिब, अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति प्रभावित हुने बताए । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले पनि निर्णय कार्यान्वयन भए निजी अस्पताललाई फाइदा पुग्ने बताए । ‘अप्रेसनको सूची बढ्नेछ,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बिदाको दिन काम गरेबापत भत्ता दिनेबारेमा पनि छलफल सुरु भएको छ तर स्वास्थ्यकर्मीले कोभिड महामारीको बेलाकै भत्ता पाउन सकेका छैनन् । करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले सरकारले छुट्टै भत्ताको व्यवस्थापन गर्न नसकिने र अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट पनि खुवाउन गाह्रो हुने राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका पूर्वनिर्देशक डा. सन्तोष पौडेल बताउँछन् । कान्ति बाल अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. रायमाझीले पनि अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट बजेट व्यवस्थापन गरेर भत्ता खुवाउन नसकिने बताए । ‘दुई दिन बिदा भए अस्पतालको दैनिक १ देखि ५ लाख रुपैयाँ आम्दानी पनि गुम्नेछ,’ उनले भने, ‘आम्दानीले विकास समितिका कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि धौधौ छ ।’
सातामा दुई दिन बिदा दिने प्रचलन यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका पालामा २०५६ साउन १ मा सुरु गरिएको थियो । शेरबहादुर शेरबहादुर आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ वैशाखमा यो प्रचलन हटाएको थियो । अहिले फेरि उनकै पालामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरिएको हो ।
प्रकाशित : वैशाख २५, २०७९ ०६:१२
तामाङ बस्ती भोट बैंक मात्रै
वैशाख २४, २०७९ प्रशान्त माली
ललितपुर — न ढलको व्यवस्था छ, न त सडक बत्ती नै । दक्षिणकाली जाने मल्लकालीन बाटोको भीर उस्तै । कलिलै उमेरदेखि यस्तै अप्ठ्यारो बाटो भएर हरेक दिन घण्टौं हिँडेर खानेपानी ओर्सार्दै आएकी छन् ललितपुर महानगरपालिका–२२ फर्सिडोलकी ७२ वर्षीया ठूली तामाङ ।
ललितपुर महानगरको अधिकांश भाग सहरीकरणतर्फ लम्कँदै गर्दा फर्सिडोलको तामाङ बस्ती अझै पनि विकट छ । २०३३ देखि चुनावमा भाग लिँदै आएको बताउने तामाङले हरेक पटक खानेपानी समस्या समाधान हुने आसमा मतदान गरिन् । जितेर गएकामध्ये कतिपय मन्त्री बने । महानगरमा गाभिएपछि २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेसबाट प्रमुख/उपप्रमुख, माओवादी केन्द्रबाट वडाध्यक्ष भए । तर, समस्या भने ज्युँका त्युँ छ । उनी गुनासो गर्छिन्, ‘डाँडाबाट रसाएर आएको पानी जम्मा पारेर खाइरहेको छु । चुनावभरि यो गर्छौं, त्यो ल्याइदिन्छौं भन्छन्, जितेर गएपछि फर्केर आउँदैनन् ।’
फर्सिडोलकी ५९ वर्षीया देवी वाइबाको घर डाँडाको बीचमा पर्छ । भूकम्पले नजिकैको मुहानको पानीमा लेउ जम्ने समस्या भयो । अहिले घण्टौं हिँडेर खानेपानी संस्थानले बोरिङ गरेको ठाउँबाट पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । उनले पनि खानेपानीकोआशामा धेरै नेतालाई भोट दिइन् । तर, अहिलेसम्म पूरा नभएको गुनासो गर्छिन् । ‘चुनावको समयमा भोजभतेर गरेर आश्वासन बाँड्छन्, हामी भोट हाल्छौं । चुनाव जितेपछि बेवास्ता गर्छन्,’ उनले भनिन् । गएको चुनावमा आफूलाई मनपर्ने पार्टीलाई भोट हाले पनि यसपटक विकासप्रेमीलाई चुन्ने उनले बताइन् ।
फर्सिडोलकै ५८ वर्षीय देवराज लामाको समस्या पनि उस्तै छ । पानीकै लागि आधा राति नै उठेर मुहानमा जानुपर्ने उनी बताउँछन् । नेताहरूले धेरै झुक्याएको भन्दै उनले पनि यसपटक हाम्रोभन्दा पनि राम्रो लाई जिताउने योजना रहेको बताए ।
प्रायःले ललितपुर महानगर भन्नेबित्तिकै लगनखेल, जावलाखेल, पुल्चोक, कुपन्डोल र पाटन दरबार क्षेत्र सम्झने गर्छन् । तर, बुङ्मती बस्तीबाट दक्षिण भेगमा पर्ने फर्सिडोल महानगरअन्तर्गत परे पनि विकासमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन । २०७३ मा सुनाकोठी, हरिसिद्धि, धापाखेल, बुङ्मती र खोकना गाभेर महानगर बनाइएको थियो ।
महानगरको एक मात्र तामाङ बस्तीका ८० घरधुरीका बासिन्दाले दशकौंदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै अन्य ठाउँमा जस्तै यहाँ पनि चुनाव रौनक छाएको छ । भूकम्पले लडेका घरमा जस्ताले छाएको स–साना झुपडीमा छन् । बस्तीमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र अन्य दलका झन्डा टाँगिएको देखिन्छ । पार्टीका आ–आफ्ना सम्पर्क कार्यालय छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणा/प्रतिबद्धतापत्रमा खानेपानी समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरे पनि पिछडिएको विपन्न बस्ती लक्षित ठोस योजना न गठबन्धनले अघि सारेको छ न त एमाले र अन्य पार्टीले नै । कांग्रेसबाट महानगर प्रमुखका प्रत्याशी चिरीबाबु महर्जनको प्रतिबद्धतापत्रमा मकवानपुरको सिस्नेरी खोलाको पानी महानगर ल्याउने योजना छ । यसबाहेक प्र्रत्येक वडामा चिकित्सकसहितको क्लिनिक सञ्चालन, प्लास्टिकको झोलामुक्त सहर, कोर क्षेत्रमा विद्युतीय गाडी सञ्चालन, लगनखेलदेखि शंखमूलसम्म ढल बिछ्याउने, सिटी हल, आधुनिक पार्किङजस्ता योजना ल्याए पनि विपन्न वर्गलाई भने समेट्न सकेको देखिँदैन ।
‘मेलम्ची खानेपानी नपुगेको स्थानमा डिप ट्युवेल खनेर भए पनि पानी खुवाउँछु । महानगरको २९ वटै वडाका सडक डेढ इन्च मोटो कालोपत्र गर्नेछु,’ महर्जनले भने । उनले चक्रपथबाहिरका साबिकका गाविसमा सडकबत्ती राख्न ठेकेदारले सर्भे गरिरहेको बताए । ‘चक्रपथबाहिरका बस्तीको विकासका लागि अन्य वडाको तुलनामा थप बजेट पनि विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने । एमालेको घोषणापत्रमा पनि सहरी गरिबलाई विद्युत् र खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गरिने भनिएको छ । बेरुजु फर्छ्यौट, भष्टाचार शून्यमा झार्ने, विद्युतीय सूचना प्रणाली अवलम्बन, उपभोक्ता हित संरक्षण, कालाबजारी, नाफाखोर प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित, भाषा, कला, संस्कृति विकास, हरियाली प्रवर्द्धनजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना छन् ।
एमालेबाट महानगर प्रमुखका प्रत्याशी हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले चक्रपथबाहिरका बस्तीमा आधुनिक कृषि प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए । ‘कृषकलाई अनुदानका सामग्री वितरण गरी घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्छु,’ उनले भने । राप्रपाले भने कृषि र पशुसम्बन्धी योजना प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि उद्योगमा रोजगारी प्रवर्द्धन, चिस्यान केन्द्र, एक वडा एक उत्पादन, सुपथ मूल्यमा कृषि मल र औजार अनुदान वितरणजस्ता योजना छन् । विवेकशील साझाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विद्युतीय यातायात, कला संस्कृति जर्गेना, खुला क्षेत्रको संरक्षण लगायत योजना ल्याएको छ ।
राप्रपाका उम्मेदवार अष्टबहादुर महर्जनले आफूले जितेमा घरेलु उद्योग स्थापना गर्नेलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने बताए । उनले तामाङ बस्तीको खानेपानी समस्या समाधान गर्न दक्षिणकाली शेषनारायणबाट पानी ल्याउने बताए । विवेकशील साझाका उम्मेदवार उज्ज्वलकृष्ण श्रेष्ठले सम्बन्धित ठाउँको समस्याबारे अध्ययन गरेर समाधान गरिने जनाए । तर, ‘चोहो’ गुठी अध्यक्ष चन्द्रबहादुर तामाङ चुनावका बेला बाँडेको आश्वासनलाई भोटको राजनीतिको संज्ञा दिन्छन् । ‘हरेक चुनावमा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले खानेपानी समस्या समाधान र सडकलगायत पूर्वाधार विकास गर्ने भन्दै भोट माग्छन् । जितेपछि नाकमुख नै देख्न नपाउने भएपछि नेताप्रति विश्वास लाग्न छोड्यो,’ उनले भने ।
प्रकाशित : वैशाख २४, २०७९ १४:१४
नागरिकता विधेयक पारित गर्न एमाले सकारात्मक छ : कानुनमन्त्री